Samak Sundaravej, We are very sorry. | News, Art and Ideas For Burma
Samak Sundaravej, We are very sorry.
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI, OTHERS' NEWS, PHOTOS — Nyo Gyi @ 12:30 pm
၀မ်းနည်းပါတယ်.. မစ္စတာ စမတ် ရယ်…
“နေ့ပြောနောက်ကြည့်၊ ညပြောအောက်ကြည့်” ဆိုသော မြန်မာစကားပုံလေးတစ်ခုရှိပါသည်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Samak Sundaravej က ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းကို ထည့်မစဉ်းစားဘဲ စစ်အဆိုးရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတွေကိုသာ ဆွေးနွေးဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့က ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
အဲသလို ဗမာပြည် စစ်အဆိုးရ အကြိုက် မဆင်မခြင် လိုက်ပြောပြီး နောက်တစ်ရက်လည်းရောက်ရော ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Samak တစ်ယောက် သူ့ကို ဖြုတ်ချလိုသော ထိုင်းပြည်တွင်း ဆန္ဒပြပွဲများနှင့် ရင်ဆိုင်လိုက်ရတော့သည်။ ကိုယ့်ပြည်တွင်းရေးကိုတောင် နိုင်နင်းကျွမ်းကျင်အောင် မစီမံ၊ မခန့်ခွဲနိုင်ဘဲနှင့် ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်အရေးကို သူက အကြံများတောင် ပေးနေလိုက်ပါသေးသည်။ ပြီးတော့လည်း သူက ဗမာပြည် စစ်အဆိုးရဘက်က။
ယခုအခါမှာတော့ သနားစရာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Samak တစ်ယောက် သူ့ပြည်တွင်းရေး မငြိမ်မသက် ဖြစ်မှုတွေကို ကိုင်တွယ်ဖို့အတွက် ဗမာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဆီက ညစ်နည်းမျိုးစုံ အကြံဥာဏ်တွေ တောင်းနေရပြီလား…. (ဒါမှမဟုတ်) ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရားထူးကနုတ်ထွက်ပေးဖို့ အထုပ်ပြင်နေရရှာပြီလား ဆိုတာကတော့ ………
Reference : http://enews.mcot.net/view.php?id=5922&t=2
MCOT English News:
“Thai PM suggests UN talks with Myanmar on democracy, constitution, elections only”
BANGKOK, Aug 25 (TNA) — Thai Prime Minister Samak Sundaravej on Monday suggested that the United Nations should only discuss democracy, constitution and elections with Myanmar.
His comments were made at Government House after he had met earlier in the day with United Nations special envoy Ibrahim Gambari, who paidasix-day visit to Myanmar last week.
Disagreeing with Western countries on their efforts to bring democracy to Myanmar with the release of detained opposition leader Aung San Suu Kyi, the Thai prime minister said talks between the world body and Myanmarauthorities could become fruitful if Mrs. Suu Kyi was left off the agenda.
If this issue was left out of discussions, the UN could talkalot with Myanmar, Mr. Samak said.
Mrs. Suu Kyi’s National League for Democracy wonalandslide victory in the general elections held in 1990 but was prevented from taking the reins of government by the military junta which has ruled the country since 1962.
Mr. Samak said he had advised Mr. Gambari during their meeting that the world body confer with the Myanmar authorities on how the country could achieve democracy, its constitution, which was approved amid criticism in May, and elections the country will hold in 2010.
Prime Minister Samak said he planned to attend the UN General Assembly annual meeting in late September and that he planned to “sell this idea” during the meeting, as Thailand is now chair of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
He said he would try to persuade the Myanmar military junta to allow observers to attend the promised election. (TNA)
(Thai Protests Photos from AFP)